I-Adobe Proto: Touch Prototyping kuthebhulethi yakho | Martech Zone
I-Adobe Proto: Touch Prototyping kuthebhulethi yakho
NgoLwesibili, Novemba 22, 2011 Douglas Karr
I-Adobe yethule uhlelo lwe thinta izinhlelo zokusebenza ezihambisana ne-Android ithebhulethi. Kuhle ukuthi i-Photoshop, i-Debut, i-Ideas ne-Kuler yenza indlela eya kuthebhulethi futhi yenzelwe isikhombimsebenzisi sokuthinta, kepha anginasiqiniseko sokuthi ngikwazi ukukhuluphela umunwe wami ngidlule kuzo futhi ngikwazi ukukhiqiza kakhulu (ikakhulukazi njengoba ngincela ku-Photoshop).
Uhlelo lokusebenza olulodwa, kuhlanganiswe ne Adobe Creative Cloud obekuvelele kimi bekungukuthi I-Adobe Proto. Ikhono lokuthola amafutha ngesakhiwo esibonakalayo somsebenzisi liyamangalisa. Sisebenzisa I-LucidCharts njengamanje futhi thanda amandla wokubambisana. Noma kunjalo, i-Proto uhlelo olumangalisayo… ikakhulukazi i- $ 10.
Ngibheke phambili ekuboneni i-Adobe Proto ifika ku-iPad!
Tags: ifu lokudala le-adobeadobe prototablet
Yeka Ukuthi Ngiyakwazi!
Feb 4, 2012 ngo-4: 41 PM
Ukumaketha okwethusayo nomkhiqizo! Kufanele usebenzise insizakalo yabo yamafu $ 149 / ngenyanga ukuze ukwazi ukwabelana ngamafayela ku-pc, awukwazi ukugcina ifayili kuthebhulethi yakho bese usebenzisa i-sdcard noma i-usbdrive, noma i-imeyili.
Kunezinye izindlela eziningi zamahhala ezikuvumela ukuthi wenze into efanayo mahhala futhi udlulise amafayela mahhala.
Ngikhulume ne-Adobe amahlandla amaningi, ngisho nabasebenzi babo abanalwazi, baneqembu le-android, kepha abazi okuningi, noma abathengisi ngaphambili, noma ukusekelwa kwe-tech. Ekugcineni ngemuva kweviki elingu-1 ngithole i-imeyili ethi akunakwenzeka ukwaba amafayela ngaphandle kwensizakalo yabo ebizayo yamafu.
Ngemuva kwalokho i-90% yabantu abayisebenzisayo abakwazi ukuthola amafayela abo ku-adobe cloud noma kunjalo. I-Adobe ayilusizo kubo, ngakho-ke abasebenzisi abanazo izimpendulo zobuchwepheshe ezingaphendulwanga, nezingasombululwanga ezingqungqutheleni ze-adobe nokuxhaswa.
Kufanele bakunikeze mahhala nge-10GB noma ngokuthize, lezi zinhlelo zokusebenza ukwehluleka ngenxa yalesi sizathu, ungadlali ngemali yakho.
Feb 5, 2012 ngo-7: 06 PM
@ google-dff452fb3bf20c4d2d9780305703bb9f: disqus - ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngalolo lwazi! Ngeshwa lokho kuyishwa. Ngiqala ukuzibuza ukuthi i-Adobe inenkinga ethile yobunikazi noma cha.